Vestfold [²vestfɔl] (ku saabsan codkani wuxuu dhagaystaa) waa gobolka Norway, oo ku taal xeebta galbeedka Oslofjord. Waxay xuduud u tahay Buskerud iyo Telemark. Maamulka gobolka wuxuu ku yaalaa Tønsberg, magaalada ugu da'da weyn ee Norwey,    iyo magaalada ugu weyn waa Sandefjord. Marka laga reebo magaalada magaalada Oslo, Vestfold waa degaanka ugu yar Norway ee degaanka. 
Vestfold wuxuu ku yaalaa galbeedka Oslofjord, sida magaca uu tilmaamayo. Waxaa ka mid ah magaalooyin badan oo yaryar, laakiin magaalooyinka si fiican loo yaqaan ee Norway, sida Larvik, Sandefjord, Tønsberg iyo Horten; magaalooyinkaas waxay ka socdaan Oslo meel ku dhow tuulooyinka ku yaala xeebta xeebta, iyaga oo ku yaala Grenland ee gobolka deriska ah ee Telemark. Wabiga Numedalslågen wuxuu dhex maraa gobolka. Jasiirado badan ayaa ku yaal xeebta. Vestfold waxaa inta badan ku badan hoyga hoose, waxaana ka mid ah meelaha ugu fiican ee beeraha Norway. Winters ayaa ku dhowaad seddex bilood, halka heerkulka xagaaga ee wacan laga soo bilaabo Maajo ilaa Sebtembar, celcelis ahaan July ee celceliska 17 ° C (63 ° F).  
Vestfold waxaa si caadi ah loogu yaqaanaa maraakiibta iyo maraakiibta. Sandefjord wuxuu horay u ahaan jiray xarun udubdhexaad ah oo Norwegian ah, iyo Horten loo isticmaali jiray deked muhiim ah. Magaalooyinka xeebta ee Vestfold ayaa hadda ku hawlan kalluumeysiga iyo doonnida. Lumbering qaarkood waxaa lagu qaadaa gudaha gudaha. Aagga waxaa sidoo kale ka mid ah qaar ka mid ah beeraleyda ugu fiican Norway. Vestfold waa gobolka kaliya ee degmada oo idil ay ku dhawaaqeen Bokmål in ay noqdaan foomka kaliya ee ay ku qoran yihiin luqada noorwiijiga 
Vestfold waxay la macaamili doontaa degmada Telemark deriska ah 1da Janaayo, 2020 iyada oo qayb ka ah dib-u-habeyn degmo oo heer qaran ah. Magaca cusub ee gobolka waa Vestfold og Telemark.  
Stavern is the second-largest town in Larvik municipality.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Vestfold&oldid=183198"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 19 Oktoobar 2018, marka ee eheed 13:36.